Iindaba - Yintoni iSityalo seKhonkrithi esiSelfowuni?
Isetyenziswa phantse kuzo zonke iiprojekthi zokwakha, ikhonkrithi ngoku iveliswa kwizityalo zekhonkrithi ezinobunzima obuchanekileyo kunye netekhnoloji yokuxuba ephezulu. Umdibaniso, isamente, amanzi kunye nezongezelelo zilinganiswa ngokuchanekileyo kwizikali zokulinganisa ngokungqinelana neendlela zokupheka zekhonkrithi ezimiselwe ngokokuvavanywa kwelebhu yangaphambili kwaye zixutywe ngokufana ngokusebenza okuphezulu kokuxutywa kwekhonkrithi okukhawulezayo ukuvelisa ikhonkrithi esemgangathweni.
Kwixesha elidlulileyo, zonke izityalo zekhonkrithi bezisenza imveliso njengezityalo zekonkriti ezimileyo, kwaye nezona zincinci zinokufakwa ngexesha elithile emva kokuhambisa iilori ezine ukuya kwezintlanu; ezo zityalo zimileyo zazivelisa ikhonkrithi kwindawo enye iminyaka emininzi. Ukwanda kwenani leeprojekthi zokwakha kunye nenani lekhonkrithi elifunekayo kwezi projekthi, kunye nesidingo sokugqitywa kwezi projekthi ngexesha elifutshane, zikhokelele iinkampani zokwakha ukuba zivelise ikhonkrithi eziyidingayo kwiiprojekthi zazo. Ngeli xesha, iinkampani zokwakha zazifuna izityalo zekhonkrithi ezihambayo, eziguquguqukayo ngakumbi, kulula ukuthutha kwaye kulula ukuzifaka kunezityalo zekhonkrithi, kuba befuna ukuhambisa izityalo zabo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye xa begqibezela iiprojekthi zabo. Izityalo zekhonkrithi ezihambahambayo ziyilelwe ukwanelisa ezi mfuno.
Umzimveliso wekhonkrithi oShukumayo uqukethe iiyunithi ezifanayo nakwisityalo esimileyo sekhonkrithi, apho ezi yunithi zimiliselwe kwisisu semoto esinama-asi kunye namavili. Xa le chassis itsalwa ngogandaganda wetrakhi, isityalo sekhonkrithi esiphathwayo sinokuhanjiswa ngokulula.
Zenzekelayo Umdibaniso Batching Machine, Inkqubo yokuDibanisa, Ngokuzenzekelayo ukudibanisa isichumisi Umxhubi, Ikhonkrithi Umxhubi Yiba nenceba, Inkqubo yokuBamba ngokuZenzekelayo, Inkqubo yokuBalwa kweDatha yokuBala,